Nwanyị anyị nke Bayside - WRSP
NWANYI ANYI NKE OGE OZO
1923 (July 12): Veronica Lueken mụrụ.
1968 (June 5): Sirhan Sirhan gburu Robert Kennedy. Emere ihe omume a na mbido ahụmịhe ọhụụ nke Lueken.
1970 (June 18): Virgin Mary pụtara n'ihu Lueken na nke mbụ ya na St Robert Bellarmine's Church.
1971-1975: "Agha nke Bayside" mere. Oge a hụrụ ka esemokwu dị n'etiti ụmụazụ Lueken na Bayside Hills Civic Association. Vigils ga-adọta ọtụtụ puku mmadụ. N'oge esemokwu ahụ, ndị uwe ojii ruru 100 ka achọrọ n'oge nche iji mee udo.
1971 (March 31): Monsignor Emmet McDonald nke Robertka St. Robert Bellarmine dere Bishọp Francis J. Mugavero, na-arịọ maka enyemaka ya n'iwepụ usoro Lueken.
1973: Otu ndị Canada a na-akpọ ndị njem uka nke Saint Michael malitere ịkwado Lueken. Ha kpọbatara ndị njem ụgbọ ala si Canada iji gaa nche ma bipụta ozi Lueken na akwụkwọ akụkọ ha, Amaokwu na Michael na-alụ ọgụ .
1973 (March 7): Onye na-enyocha mbara igwe Czech bụ Lubos Kohoutek hụrụ ọhụụ ọhụrụ. Baysiders kọwapụtara nkenke Kohoutek dị ka "bọọlụ mgbapụta" nke akọwara n'ọhụụ Lueken.
1973 (June 29): Nrụgide sitere na Bayside Hills Civic Association na St. Robert Bellarmine nke kansụl parish, Chancellor James P. King guzobere kọmitii iji nyochaa ọhụụ Lueken. Kọmitii ahụ gụpụtara ihe niile Lueken dere site n'eluigwe wee kwubie na ọhụụ ya "enweghị eziokwu zuru oke."
1973 (November 27): Diocese wepụrụ akpụrụ akpụ nke Mary na St. Robert Bellarmine's na mbọ iji kwụsị nche. Ndị pilgrim zaghachiri site n'iwegara ha ihe oyiyi nke ha ji fiberglass mee.
1974 (Jenụwarị 29): Nwa nwoke nke ọdụdụ nke Lueken, Raymond, ka agbagburu wee gbuo ya n'ihe ọghọm ịchụ nta ka ya na ndị enyi ya nọ na New York dị nso na Callicoon. Lueken ghọrọ onye zuru oke mgbe ọ nwụsịrị.
1974 (June 15): Daniel Slane dị afọ iri na asaa sooro onye pilgrim na arụmụka kpụ ọkụ n'ọnụ. Mgbe ọ na-alaghachi n’ụgbọala ya, amaara ya mma ugboro abụọ n’azụ. Ndị isi ụka kwuru na onye gburu ya bụ onye njem uka nke Saint Michael nke banyere n'ụgbọ ala ma gbaga Canada nke ọma.
1975 (May 22): Lueken na ndị na-eso ụzọ ya kwetara na ha ga-akwaga na Flushing Meadows Park. Na May 26, e mere nlezianya mbụ na Flushing Meadows Park.
1975 (June 14): Bayside Hills Civic Association haziri "Day of Jubilation" iji mee emume iwepụ ndị njem ala nsọ.
1975 (Septemba 27): Lueken zipụrụ ozi na-akpọsa "pope imposter," onye ọrụ komunizim nke gbanwere ọdịdị ya site na ịwa ahụ plastik yiri Paul VI.
1977: Ndị njem ala nsọ nke Saint Michael kwụsịrị nkwado ha. Isi ihe kpatara ha ji apụ bụ maka ma ndị njem ala nwanyị kwesịrị iyi akwa berets ma ọ bụ acha ọcha. Agbanyeghị, ebum n'uche ha n'ezie bụ na onye ama ama Lueken bịara ikpuchi njem ha. Ejikọtara òtù Lueken dị ka "Nwanyị Nwanyị nke Roses Shrine" wee bido ịmepụta akwụkwọ akụkọ nke ya. Ọ gara n'ihu na-eto.
1983 (June 18): E mere atụmatụ na ndị pilgrim 15,000 sitere na gburugburu ụwa gbakọtara na Flushing Meadows Park maka afọ nke iri na atọ nke ọhụụ mbụ nke Mary na Bayside.
1986: Bishop Mugavero kwupụtara nkwupụta siri ike, na-ekwupụta na ọhụụ Lueken bụ ụgha. E zigara ya na dayọsis na United States na ọgbakọ ndị bishọp gburugburu ụwa.
1995 (August 3): Veronica Lueken nwụrụ.
1997 (November): Otu esemokwu dị n'etiti Arthur Lueken nke di ya nwụrụ anwụ na onye isi ụlọ ọrụ Michael Mangan kewara ndị Baysider. Otu abụọ a bidoro na-achọ ego, ndị na-eso ụzọ, yana ịnweta ebe nchekwa na Flushing Meadows Park.
1997 (Disemba 24): Otu ọka ikpe nyere Arthur Luken aha “Our Lady of the Roses Shrine” tinyere akụ na akụrụngwa niile. Tù Mangan hiwere otu nzukọ ha kpọrọ "Saint Michael's World Apostolate."
1998: Ngalaba Parks nke New York gbaghaara nkwekọrịta na-enye ohere ka otu abụọ ahụ kere òkè ịbanye na ogige ahụ.
2002 (August 28): Arthur Lueken nwụrụ. Vivian Hanratty ghọrọ onye ndu ọhụrụ nke "Our Lady of the Roses Shrine". Nwanyị anyị nke Roses Shrine na Saint Michael's World Apostolate gara n'ihu na-elegide anya na Flushing Meadows Park.
Ihe ngosi a na Bayside malitere site na Veronica Lueken, nwunye nwanyi Roman Katọlik si Bayside, New York, onye ghọrọ onye
Marian ọhụ ụzọ. Ihe omuma ihe omimi mbu nke Lueken gbasoro ogbugbu nke Senator Robert Kennedy na June 5, 1968. N’echi ya, ka Kennedy dina n’ụlọ ọgwụ, Lueken nọ na-ekpe ekpere maka mgbake ya mgbe ọ hụrụ na-esi ísì ụtọ nke Roses gbara ya gburugburu. N’agbanyeghi na onye omebe iwu ahu nwuru n’abali ahu, isi osiso nke Roses gara n’iru ya. N'oge na-adịghị anya ọ ga-eteta hụ na o dere abụ ọ na-echetaghị ide. O kpere ekpere na St. Therese nke Lisieux iji chekwaa senator Kennedy ma chee na Therese bụ onye edemede nke uri ndị a n'ụzọ ụfọdụ. Ya na ndị ụkọchukwu nọ na parish ụka ya, St. Robert Bellarmine, tụlere ahụmịhe ndị a, mana ọ chere na ha ejighị ya kpọrọ ihe. Di ya, bụ́ Arthur, kụzikwara okwu ọ bụla banyere ọrụ ebube.
Ọkọchị ahụ ọhụụ ya mere ka ọchịchịrị. Na mbara igwe n'elu Bayside, ọ hụrụ ọhụụ nke ugo ojii na-eti mkpu "Ahụhụ, ahụhụ, ahụhụ ga-adịrị ndị bi n'ụwa!" O kwenyesiri ike na ọhụụ ndị a na-emenye ụjọ na-egosi ọdachi na-abịanụ. O dere Kadịnal Richard Cushing na Boston wee dọọ ya aka na ntị na ihe dị egwu na-aga ime. Ọ na-echekwa na mmetụta ọ na-eto eto bụ ihe jikọrọ ya na Second Vatican Council nke mechiri na 1965. Lueken chere na hadka agbakụtala azụ na ọdịnala Katọlik ọ na-eme kemgbe ọ bụ nwa agbọghọ. Na 1969, o degaara Pope Paul VI akwụkwọ ozi wee gwa ya ka ọ megide mgbanwe nke kansụl ahụ.
N'April, 1970, Virgin Mary pụtara n'ihu Lueken n'ime ụlọ ya. Ọ mara ọkwa na ọ ga-apụta na St. Robert
Chọọchị Bellarmine na Bayside “mgbe Roses na-ama oge.” N'abalị nke June 18, 1970, Lueken gburu ikpere naanị na mmiri ozuzo na-ekpe ekpere rosary n'ihu ihe akpụrụ akpụ nke Immaculate Conception n'èzí chọọchị ya. N’ebe a, Meri pụtara n’ihu Lueken ma gwa ya na ya bụ nwunye nwanyị nke Kraịst, na ọ kwara akwa maka mmehie nke ụwa, na onye ọbụla ga-alaghachi na-ekpe chaplet. Lueken kwuputara na a ga-ewu ụlọ arụsị mba na mbara ala ụka ahụ na Mary ga-apụta n'ihu ebe ahụ n'ụbọchị oriri Katọlik ọ bụla. N'ime afọ abụọ sochirinụ, obere ìgwè ndị na-eso ụzọ sonyeere Lueken na nche ya n'ihu ihe akpụrụ akpụ. Na ngosipụta nke ọ bụla, Lueken ga -eweta “ozi nke sitere n’eluigwe,” nke Meri kwuru site na ya yana ọtụtụ ndị sent na ndị mmụọ ozi na-abawanye. Ozi ndị a gụnyere jeremiads banyere oke njọ nke mmehie America na ịdọ aka na ntị nke ntaramahụhụ na-abịanụ (Lueken 1998: mp. 1).
Na 1973, ọhụụ Lueken dọtara uche ndị Pilgrims of Saint Michael, ndị otu Katọlik na-achọghị mgbanwe nke sitere na Quebec. A makwaara ndị njem ala nsọ ahụ dị ka "ndị White Berets" maka okpu ha na-eyi. Dị ka Lueken, ndozigharị nke Vatican nke Abụọ nsogbu ha. Ndị White Berets kwupụtara Lueken dị ka "onye ọhụụ nke oge a" wee bipụta ozi ya site n'eluigwe na akwụkwọ akụkọ ha. Ha malitekwara ịhazi bọs na-ebuga ọtụtụ narị ndị njem ala nsọ iji gaa nlegharị anya n'ihu ụka parish Lueken. Ozi Lueken bidoro ituputa izu nzuzo zuru ụwa ọnụ, agha nuklia na-abịanụ, na otu igwe nke akpọrọ "The Fiery Ball of Redemption" nke ga-adakwasị ụwa n'oge na-adịghị anya, na-ebute mbibi zuru ụwa ọnụ.
Ndị isi ụka anabatala ihe omume Lueken ruo afọ atọ, mana usoro ọ na-eto eto na-ebute ọgba aghara. Churchlọ nke St Robert Bellarmine gbara ụlọ ndị mmadụ gburugburu n'akụkụ ya niile na ndị Bayside Hills Civic Association (BHCA) na-atụ ụjọ site n'aka ìgwè ndị njem ala nsọ nke gbadara na mpaghara ha dị jụụ. Ndị bi na ya jụrụ ịmụrụ anya nke na-adịru etiti abalị. Ha kwuru na ndị njem ala ụkwụ na-azọda ahịhịa ahịhịa ha aka wee na-agbada ụkpụrụ akụ nke ụlọ ha. BHCA tinyere nnukwu nrụgide na parish na Diocese nke Brooklyn iji mee ka Lueken na ndị na-eso ụzọ ya n'ikiri ụkwụ (Caulfield 1974).
Mgbe nchọpụta diocese mere ọsọ ọsọ kọọrọ na ahụmịhe ya abụghị nke karịrị nke mmụọ, a gwara Lueken ka ọ kwụsị ịmụrụ anya na St. Robert Bellarmine. Mgbe ọ jụrụ, ndị isi diocese malitere iji ehi na-emechi anya ya, na-agụ akwụkwọ ozi sitere na bishọp ma nye ndị Katọlik niile kwesịrị ntụkwasị obi aka ka ha ghara isonye. Lueken na ndị na-eso ụzọ ya zara na ụzọ aghụghọ dị otu a gosipụtara naanị etu izu aghụghọ Setan gbasaa na Chọọchị kemgbe Vatican II. BHCA malitere ijigide nche anya na ndị njem ala mmụọ. Ọnọdụ ahụ ghọrọ ihe dị egwu ma zigara ọtụtụ ndị uwe ojii ka ha wee nwee udo. E jidere ọtụtụ ndị bi na ya maka aghara aghara na wakpo ndị uwe ojii. Fọdụ gara ụlọ ọgwụ ọbụna mgbe ha nwesịrị ọgụ ike mgbe ha na ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị pilgrim bịara. Ihe omume ndị a bịara bụrụ ihe akpọrọ "The Battle of Bayside" (Cowley 1975). E mechara dozie ọnọdụ ahụ na 1975 mgbe Courtlọikpe Kasị Elu nke New York nyere iwu machibidoro Lueken ka ọ ghara ịnọ na-eche nche n'akụkụ St. Robert Bellarmine's (Thomas 1975; Everett 1975). N’abalị ahụ tupu ikwenye na iwu ahụ, Lueken natara ozi sitere n’aka Meri na Jizọs ka ha weghachite nche ndị ahụ na Flushing Meadows Corona Park (Lueken 1998 vol. 3, p. 106-07).
Ebe nche ohuru a bu ihe ncheta akara ebe Vatican Pavilion guzoro n'oge World Fair. Ndị na-eso ụzọ nwere
zụrụ ihe oyiyi fiberglass nke Virgin Mary nke e wetara n'ogige maka nche. Ìgwè mmadụ ahụ nọgidere na-eto. Ndị njem ala nsọ nke Saint Michael mechara kwụsị nkwado ha wee laghachi Canada. Mana ka ọ dị ugbu a ụmụazụ Lueken mepụtara ozi haziri ahazi. Tù ahụ mepụtara ụlọ ọrụ ahụ bụ “Our Lady of the Roses Shrine,” nke na-ejikwa ndepụta ọtụtụ puku akwụkwọ ozi na mba ụwa. Otu a kpọrọ Order of St. Michael duziri mgbalị ndị ozi ala ọzọ nke otu ahụ. Ndị otu Iwu ahụ, nke gụnyere ndị bụbu ndị njem ala nsọ nke Saint Michael, biri na obodo ma tinye oge ha niile n'ụlọ arụsị. Na June 18, 1983, puku ndị njem iri na ise si gburugburu ụwa gbakọtara na Flushing Meadows Park maka afọ nke iri na atọ nke ngosipụta na Bayside.
Ndị Katọlik ndị kwenyere na ozi Lueken bịara kpọọ onwe ha "Baysiders" mgbe mbụ ọnọdụ ahụ pụtara. N'ụzọ dị ịtụnanya, ndị bi na Bayside, New York, kpọkwara onwe ha "Baysiders." Ha na-ele ndị njem ala nsọ anya dị ka ndị mbuso agha na ndị mba ọzọ ma nwee mgbagwoju anya na ha ga-azọrọ onwe ha aha a. N'ime oge 1980, etinyere isi Baysider n'ofe United States na Canada. A sụgharịrị ozi Lueken n'ọtụtụ asụsụ ma kesara ya na ndị Katọlik na mpaghara niile.
Ndị Baysiders kwupụtara na ha bụ ndị Katọlik ọdịnala na-eguzosi ike n'ihe nye iwu ndị iwu na Holy See. Kaosiladị, nnupụisi ha na diocese Brooklyn mere ka ọtụtụ ndị Katọlik were ha dịka ndị nnupụisi na nkewa. Obere oge ka ọ bịarutere na Flushing Meadows, Lueken wepụtara mkpughe nke doziri nsogbu a, ma ọ dịkarịa ala maka ndị na-eso ụzọ ya. Popu Paul nke Isii, onye kwadoro mgbanwe nke Vatican II, bụ onye isi. Ndị na-akpa nkata jidere ezigbo popu ahụ kpamkpam, nwoke ahụ na-azọrọ ugbu a na ọ bụ Paul nke Isii bụ n'ezie onye komunizim doppelganger nke eji ịwa ahụ plastik mee. Ndị Baysiders abụghị ndị nnupụisi megide theirka ha, ha na-ajụ naanị iwu nke ndị na-akpa nkata na ndị aghụghọ bụ ndị batara n'ọchịchị ụka (Lueken 1998 mp. 3, p. 241).
Na 1986, Francis J. Mugavero, bishọp nke Brooklyn, kwupụtara ọkwa na-ekwughachi na ọhụụ Lueken bụ ụgha na emegide Ozizi Katọlik (Goldman 1987). Ihe ndị Mugavero chọpụtara bụ nke ezigara narị bishọp narị atọ na United States na otu narị nzukọ ndị bishọp gburugburu ụwa. N'agbanyeghị nkatọ a sitere n'aka ndị isi ụka, ndị na-eso ụzọ Lueken ka na-egosi na ha bụ ndị Katọlik nọ n'ọnọdụ dị mma ma na-agbachitere echiche ha na-ekwu iwu canon. Ha na-ekwusi ike na ọhụụ Lueken enwetabeghị ezigbo nyocha nke bishọp na-eduzi, na ịchụpụ Diocese nke Lueken abụghị nke ziri ezi. Ọ bụrụ na onye ọ bụla emebi iwu Churchka, ha na-arụ ụka, ọ bụ ndị ọgbara ọhụụ ka Lueken katọrọ maka ịnata udo na mmebi iwu ndị ọzọ megidere ọdịnala Katọlik dịwara kemgbe.
Lueken nọgidere na-esi n’eluigwe na-ezi ndị mmadụ ozi ruo mgbe ọ nwụrụ na 1995. N’ozuzu ya, Meri, Jizọs, na ọtụtụ ndị ọzọ nọ n’eluigwe gwara ya okwu ihe karịrị narị ugboro atọ. Emejuputara ozi ndia dika akwukwo ndi amara dika amuma Bayside. Agbanyeghị na igwe mmadụ ahụ anọghị nso etu ha dị tupu Lueken anwụọ, Baysiders ka na-aga Flushing Meadows site na tere aka India na Malaysia. Na Intanet, ozi Lueken abụrụla akụkụ nke nnukwu echiche nke izu nzuzo na ịkọ nkọ banyere otu puku afọ. Baysiders ka na-eche "The Chastisement" nke akọwara na ozi Lueken. Ọtụtụ ndị Baysiders kwenyere na mgbe Chineke tara mmadụ ahụhụ maka mmehie ya, ntaramahụhụ a ga-enwe ụzọ abụọ, Agha IIIwa nke Atọ (nke ga-agụnye mgbanwe mgbanwe nuklia buru ibu) na comet na-enwu ọkụ nke ga-emegide ụwa ma mebie ụwa.
Mgbe Lueken nwụsịrị, Nwanyị anyị nke Roses Shrine gara n'ihu na-ele anya, na-akwalite Amụma Bayside, na ịhazi
njem njem na Flushing Meadows na ndị na-eso ụzọ si gburugburu ụwa. Mana n’afọ 1997, nghọtahie dị n’etiti onye isi ụlọ arụsị, Michael Mangan na nwoke onye Lueken nwụrụ, Arthur Lueken. Otu ọkàikpe kpebiri ikpe Arthur Lueken, na-ekwupụta na ọ bụ onye isi ala nke Our Lady of the Roses Shrine (OLR) wee nye ya akụ na akụrụngwa niile nke nzukọ ahụ. N’enyeghị ụjọ, Mangan guzobere otu nke ya, Saint Michael’s World Apostolate (SMWA). Otu abụọ ahụ gara n'ihu na-abanye na saịtị dị nsọ nke Flushing Meadows ebe ha na-ele anya. Ọzọkwa, ezigara ndị uwe ojii ka ha wee nwee udo (Kilgannon 2003). Taa, esemokwu a agbanweela ka ọ bụrụ detente. Ememme ha nke ụbọchị oriri ndị Katọlik na-egbu oge oge ụfọdụ na naanị otu ga-anọ n'ogige ahụ n'ụbọchị enyere. Maka mmemme ebe otu abụọ ga-anọ, dị ka elekere nke ụtụtụ Sọnde, ha na-agbanwe otu ọzọ ga-enwe ohere ịbanye na ncheta ahụ. Otu otu nwere ike ịtọ akpụrụ akpụ nke Virgin Mary na Vatican Ncheta, ndị ọzọ ga-eji a nso okporo ụzọ agwaetiti. Ndị otu asọmpi ahụ ekpebiela na ọ bụ maka ọdịmma onye ọ bụla ịpụta dị ka onye ọkachamara mgbe ọ nọ n'ogige ahụ.
Amụma ndị Bayside jupụtara na mpịakọta isii ma nwee ọtụtụ narị ozi. Ndị nkatọ ekwuola na ụfọdụ n'ime ihe ndị a dị ka ihe dị oke egwu, nwere ntụaka doro anya maka isiokwu ndị dị ka UFO, ụzarị ọnwụ Soviet, na vampires. Agbanyeghị, dị ka usoro okpukpe ọ bụla nwere ederede dị nsọ, ọtụtụ Baysiders anaghị atụgharị amụma niile ahụ n'ụzọ nkịtị ma ọ bụ tinye nkwanye nha anya na ozi ọ bụla. Kama nke ahụ, amụma ndị ahụ bụ akụ nke Baysiders wetara iji ghọta ụwa. Ọtụtụ Baysiders na-akọwa ihe ndị dị ugbu a dị ka mkpughe nke amụma ndị akọwapụtara na amụma Bayside.
Nkwenkwe kachasị mkpa maka Baysiders bụ na Veronica Lueken bụ nwanyị pụrụ iche na ihe ncheta nke Flushing Meadows Park bụ ebe dị nsọ ebe ekwesịrị ịnọ na nche. Baysiders kwetakwara na ndozigharị nke Vatican nke Abụọ bụ nnukwu ndudue ma ọ bụ ụma akpachapụrụ anya mebie Churchka, na America nọkwa n'ọnọdụ ọdịda omume. Tụkwasị na nke a, ọtụtụ kwenyere na nnupụisi zuru ụwa ọnụ nke Setan (Martin 2011) na-eyi nnwere onwe ha dị ka ndị America na ndị Katọlik egwu. Ọ bụ ezie na Lueken kwuru na onye nnọchi anya ọchịchị Kọmunist gosipụtara Paul VI nke ọma, nkwenkwe a adịghị mkpa na Baysider worldview (Laycock 2014).
Akwụkwọ Amụma ndị Bayside na-akọwakwa ọnọdụ mbibi nke a kọwara dị ka "Chastisement." Wdọ aka na ntị banyere ọdachi na-abịanụ abụwo otu trope na Marian apparition kemgbe narị afọ nke iri na itoolu. Ọhụụ Lueken kọwara ugboro ugboro ihe na-enwu ọkụ nke dị n’eluigwe akpọrọ “The Ball of Redemption” (ikekwe kọmpụta, ọ bụ ezie na nke a edoghị anya), nke ga-adaba na ụwa, na-egbu ọtụtụ ndị bi na ya. Ọhụụ ya na-akọwakwa Agha Worldwa nke Atọ, nke ga-agụnye mgbanwe nuklia zuru ezu. Nkọwa na-eyi egwu banyere agha nuklia abụwokwa ihe a na-ahụkarị na Marian Apparition kemgbe mmalite nke Agha Nzuzo. N'adịghị ka oge ụka Protestant, Baysiders kwenyere na enwere ike yigharịrị Chastisement site n'ekpere. Mgbe amụma anaghị emezu, Baysiders na-anara otuto maka ị nweta ụwa iwepụ site na ikpe.
Fọdụ ozi Lueken na-arụtụ aka na "owuwe" nke a ga-eburu ndị kwesịrị ntụkwasị obi gaa n'eluigwe ma chebe Chastisement (Lueken 1998 mp. 4: 458). Ndị nnọchi anya Saint Michael's World Apostolate akọwaala na echiche a abụghị otu echiche ndị Protestant maka owuwe nke si n'aka John Nelson Darby. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị Baysiders kwenyere na Chastisement ga-emesị mee dị ka e buru n'amụma, ha adịghị ewu ụlọ mgbochi bọmbụ ma ọ bụ na-ebubata ihe. Fọdụ kwudịrị na Chastisement nwere ike ọ gaghị eme n'oge ndụ ha (Laycock 2014).
Ndị Baysiders na-aga n'ihu na-eche nche na Flushing Meadows Park na ụbọchị oriri Katọlik niile. Ha na-ejidekwa “Sunday Morning Holy Oge Awa ”ụbọchị Sọnde niile nke a raara nye ekpere maka ọkwa nchụ aja. Emere ihe omume ndị a gburugburu ihe ncheta wuru na Flushing Meadows Park dị ka akụkụ nke Vatican Pavilion n'oge 1964 World Fair. Ihe ncheta ahụ, nke a maara dị ka Excedra, bụ bench dị nro gbagọrọ agbagọ dị ka mpịakọta na-enweghị mmeghe. N'oge nche, ihe ncheta ahụ ghọrọ shrine. Ejiri mpempe akwụkwọ Meri mekọtara n'elu oche ahụ ma kandụl, ọkọlọtọ na-anọchi anya United States na Vatican, na ihe omume ndị ọzọ. A na-ejikwa mmiri dị nsọ doo ala ahụ nsọ.
N'ime nzukọ ndị a, ndị njem ala nsọ na-ekpe ekpere pụrụ iche nke rosary nke gụnyere Ekpere nye Saint Michael na Ekpere Fatima. Ha na-agụkwa ego ndị Katọlik. Ka ha na-ekpe ekpere, a na-agba ndị njem ala ume ka ha gbuo ikpere n'ala mana ha nwere ike iguzo ọtọ, ịnọdụ ala, ma ọ bụ ije ije. Ọtụtụ ndị njem ala nsọ na-eweta oche nke ha n'ogige ahụ ma ọ bụ ihe ndị dị nro dịka ihe atụ kapeeti iji jiri ikpere.
Vigils na-ejedebe n'ememe mgbe a na-ejide chaplet iji gọzie Meri na Jizọs. N'oge ememe a, a na-ahụta Jizọs na Meri ka ha nọ n'ogige ahụ. Dịka, a na-agba onye ọ bụla nwere ike ikpere ume ume ime nke a. Ọnọdụ dị nwayọ dị ka Baysiders na-ewepụta rosaries ha ka a gọzie ha.
Mgbe nke a gasị, a na-enye onye ọ bụla kandụl na ogologo ogologo osisi. (Baysiders nyere Roses tupu nche ọ bụla). Ndị pilgrim na-ebuli kandụl ha n'ogologo aka ha karịa isi ha wee sị, "Mary, ìhè nke ụwa, kpee ekpere maka anyị." A na-agbadọ kandụl ahụ ruo mgbe ha nwere ihu ma otu a na-ekwu, "Nwanyị anyị nke Roses, kpee ekpere maka anyị." Mgbe ahụ, kandụl ahụ na-agbada ọzọ ruo mgbe ha jikọtara obi na otu na-ekwu, "Mary, Enyemaka nke Ndị Nne, kpee ekpere maka anyị." A na-emeghachi ụkpụrụ a ọtụtụ ugboro. Ememe a gara n'ihu kemgbe a na-eche nche na St. Robert Bellarmine's (Laycock 2014).
Mgbe anya, a na-ewere rosaries na Roses dị ka ndị a gọziri agọzi. A na-etinye mkpịsị osisi ndị a gọziri agọzi ma jiri ha agwọ. Ọtụtụ ndị Baysiders na-enye ha ndị enyi ha na-arịa ọrịa ma ọ bụ nwee nsogbu mmụọ. Bfọdụ ndị Baysiders erila mkpịsị osisi ndị na-esochi emume a, nke a na-ahụta dị ka ụzọ nkwanye ùgwù iji tufuo ihe a gọziri agọzi.
Ahụkarị maka ịmụrụ anya nwere ike ịbụ naanị mmadụ iri na abụọ ma ọ bụ iri na atọ. Agbanyeghị, ụfọdụ nche, ọkachasị ncheta ncheta emere na June 18 ọ bụla, ka na-adọta ọtụtụ narị ndị njem ala nsọ, ụfọdụ n’ime ha si gburugburu ụwa. Ndị ụkọchukwu na-anọkarị n'oge nlebara anya. Ndị ụkọchukwu a na-abụkarị ndị ọdịnala ndị gara diocese ọzọ gaa Flushing Meadows Park. Ha ga-edozi oche oche mgbe niile na Exedra ebe ha na-ekwupụta mmehie ha.
Na mgbakwunye na nche, akụkụ ọzọ dị mkpa nke omenala Baysider metụtara “foto dị ebube.” Nhazi nke Lueken's ngagharị dabara na mmepe nke ese foto Polaroid. Ọtụtụ ndị njem ala nsọ were Polaroids n'oge nche ma hụ anomali na fim ahụ. Imirikiti mmetụta ndị a bụ ihe ekwesiri iji nweta njehie onye ọrụ ma ọ bụ ihe ọkụ ọkụ gburugburu dị ka kandụl ma ọ bụ ọkụ ụgbọ ala. Otú ọ dị, ụfọdụ dị egwu ma sie ike ịkọwa. A na-ahụta nsogbu ndị a dị ka ozi sitere n'eluigwe (Wojcik 1996, 2009). Mgbe Lueken dị ndụ, ndị mmadụ nwere ike iwetara ya "Polaroids dị ebube" ya na ọ ga-akọwara streaks na bluu ndị pụtara na ihe nkiri ahụ, na-achọta ihe atụ ha (Chute na Simpson 1976). Taa, ndị nkịtị Baysiders ewepụtala koodu iji kọwaa ọnọdụ ndị ahụ. N'oge nche, ndị njem ala nsọ na-ewere ọtụtụ foto ma gaa n'ihu na-achọta nsogbu. Ọ bụ ezie na ejiri igwefoto dijitalụ mee ihe, ụfọdụ ndị njem ala nsọ na-ahọrọ iji igwe foto Polaroid vintage dịka ndị ejiri n'oge nche mbụ. Chọpụta “ozi sitere n’eluigwe” na foto nwere ike ịbụ isi ihe bara uru dịịrị ụfọdụ ndị Baysiders.
Kemgbe schism nke 1997, ndị Baysiders kewara n'etiti ndị otu abụọ na-asọrịta mpi ga-enwerịrị ohere ịnweta Flushing Meadows Ogige. Saint Michael's World Apostolate bụ otu buru ibu, nke Michael Mangan na-eduzi. Agbanyeghị na ụlọ ikpe nyere onye nwụrụ anwụ aha ya bụ “Our Lady of the Roses Shrine” aha nwanyị anyị nwụrụ, ndị otu Mangan nwere nkwado karịa n’aka ndị njem ala nsọ ma nweta ọtụtụ akụrụngwa. Mgbe Nwanyị Nwanyị Nwanyị Roses Shrine enweghị ike ilekọta ígwè obibi akwụkwọ ha, ndị otu Mangan mere ndokwa ịzụta ha. Ndi otu nwoke ana akpo ndi Lay Order of Saint Michael bu ndi isi Michael Saint World's Apostolate, ndi bikwa na okpukperechi. Ọtụtụ ndị ọrụ ụlọ arụsị na-akwado ha nke na-enyere aka inweta ego, kesaa ozi, na ịhazi nche.
Vivian Hanratty, bụ onye pere mpe na-akwado otu pere mpe, bụ onye kwadoro mbugharị Lueken site na imepụta vidiyo maka ọwa telivishọn New York UHF. Ọ ghọrọ onye isi otu ahụ mgbe Arthur Lueken nwụsịrị. Onye ndu ya nwere ihe ijuanya dịka ọtụtụ ndị Baysiders na-akwado ọrụ okike ọdịnala ma na-emegide ụmụ nwanyị na-eduga ọrụ okpukpe. Nwanyị anyị nke Roses Shrine kwenyere na otu ụbọchị ndị isi ụka ga-achọpụta na ha hiere ụzọ gbasara amụma Lueken. N'oge ahụ, a ga-enyefe ụlọ nsọ ahụ na chọọchị ahụ ma bụrụ onye isi agaghị adị mkpa (Laycock 2014).
Baysiders na-arụsi ọrụ ike na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma sonyere ndị Katọlik ndị ọzọ na-achọghị mgbanwe na ihe ndị dị ka ịkọwa ụlọ ọgwụ na-ete ime, na-ese fim ndị ha na-ele anya dị ka ihe na-adịghị mma, na mkpesa Iwu Nlekọta Ahụ. Ha na-anọgide na-emegharị echiche ụwa dum. N'oge na-adịbeghị anya, Saint Michael's World Apostolate ahazila ọtụtụ okwu na United Nations, nke ha na-ewere dị ka ngwá ọrụ maka ịmepụta otu ọchịchị ụwa Setan.
Ndị Baysiders ka nwere olile anya na otu ụbọchị ndị isi ụka ga-ewere ha nke ọma. Ha nwere olile anya na a ga-eme nyocha zuru ezu na Veronica Lueken na ọhụụ ya, yana ntụgharị na ọgwụgwọ ọrụ ebube ndị ekwuru na ọ mere n'ihe metụtara ngosipụta na Bayside na Flushing Meadows Park.
Caulfield, William. 1974. "Vigils." Ugwu Bayside Hacon, Septemba, p. 3.
Chute, Suzann kwa izu na Ellen Simpson. 1976. "njem uka na Bayside: 'Nwanyị anyi nke ndi Roses' biara ibia ahihia ahihia." Akwụkwọ edere na American Folklore Society Annual Meeting, Philadelphia, PA, November 11.
Cowley, Susan Cheever. 1975. "Nwanyị Nwanyị anyị nke ugwu Bayside." Newsweek, June 2, peeji nke 46.
Cuneo, Michael. 1997. Anwụrụ ọkụ nke Setan: Ndị na-achọghị ọdịnala na ndị omenala adịghị Katọlik ndị America oge a. New York: Oxford University Press.
Everett, Arthur. 1975. "Okpukpe Street Vigils na NY biri." Oge Petersburg, Mee 24, p. 4-A.
Garvey, Mak. 2003. Na-eche Meri: America Na-achọ Ọrụ Ebube. Cincinnati, OH: Akwụkwọ Emis.
Goldman, Ari L. 1987. “Bishọp jụrụ Nkwupụta Ọpụpụ.” New York Times, February 15. Nweta site na http://www.nytimes.com/1987/02/15/nyregion/religion-notes-for-cardinal-wiesel-visit-proved-a-calm-in-storm-over-trip.html na 11 April 2014.
Laycock, Joseph. 2014. Onye Hụrụ nke Bayside: Veronica Lueken na Mgbalị maka Katọlik. New York: Oxford University Press.
Kilgannon, Corey. 2003. “Ọhụụ nke Mbibi Dour na Queens; Amụma, na Onyinye, n'Ebe Nsọ. ” New York Times , October 9. Nweta site na http://www.nytimes.com/2003/10/09/nyregion/visions-of-doom-endure-in-queens-prophecy-and-a-rift-at-a-shrine.html na 11 April 2014.
Lueken, Veronica. 1998. Virgin Mary's Bayside Amụma: Onyinye Lovehụnanya, Mpịakọta nke 1-6. Lowell, MI: Oge Ikpeazụ nke ministri.
Martin, Daniel. 2011. Vatican II: Oge Ntughari Akụkọ. Bloomington, IN: AuthorHouse.
Ọnụahịa, Jo-Anne. 1973. "Churchka wepụrụ ihe akpụrụ akpụ na esemokwu nke ọhụụ." The New York Times, December 2, p. 158.
Thomas, Robert McG Jr. 1975. "Nwanyị kwenyere ịgbanwe saịtị nke Virgin Vigils." The New York Times, Mee 23, p. 41.
Wojcik, Daniel. 1996. Ọgwụgwụ nke aswa dị ka anyị si mara ya: Okwukwe, Fatalism, na Apocalypse na America. New York: New York University Press.
Wojcik, Daniel. 1996. "Polaroids si Eluigwe: Foto, Okpukpe Okpukpe, na Omenala Omenala Ochie na saịtị Marian Apparition." Akwụkwọ akụkọ American Folklore , 109: 129-48.
Wojcik, Daniel. 2000. "Bayside (Nwanyị Anyị nke Roses)." Pp. 85-93 n'ime Encyclopedia nke Millennialism na Millennial Movements , nke Richard A. Landes dezigharịrị. New York: Ntughari.
Wojcik, Daniel. 2009. "Mmụọ, Nkọwapụta, na Omenala nke Eluigwe Foto." Ihe omuma anya: akwukwo akwukwo nke International 25: 109-36.